Ndị na-ebunye ihe nkedo igwe teapot na ụlọ ọrụ - ndị na-emepụta ihe nkedo nke China
Kettle ofe igwe anaghị adị mma nke a na-etinye n'ime ụlọ nke enameled maka 30 oz (900 ml)
Ihe atụ teapot diamond, atụ aro ka ọ ghara ibu karịa 24 oz / 700 ml mmiri maka obụpde.Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọrọ ọkara nke 30 oz, nke a bụ naanị nha kwesịrị ekwesị.
Teapot dị na nkedo Iron nwere ihe mgbochi tii mbughari n'ụdị Japanese
Enwere ike iji ite tii nke nkedo mee ka mmiri sie dị ka ite tii.A pụkwara iji ya mee tii ma ọ bụ sie tii ka ọ bụrụ teapot.
Were Iron Teapot wụsa igwe anaghị agba nchara maka tii ojii dị ka onyinye
Nke a nkedo teapot bụ ngwa zuru oke maka kichin ma ọ bụ ụlọ iri nri gị.Ite ahụ nwere aka na mkpuchi.Jiri ite a mara mma mgbe ị na-enye ezinụlọ gị, ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị tii.
Ụdị nke Japanese Nkedo Iron Black Hobnail Tea Pot Kettle
Nkedo Teapot Iron Mee Ka Mmiri Ọn̄ụ Gị Dị Mma.Ihe nkedo nke ígwè teapot nwere ike imeziwanye ogo mmiri site na ịwepụta ion iron na ịmịnye ion chloride n'ime mmiri.
Ihe nkedo tii nke Japanese nke igwe teapot infuser strainer tọọ nchara igwe anaghị agba nchara
A na-eji ígwè nkedo dị oke mma, nke na-adịgide adịgide, mara mma na ahụike.Ihe kacha mma teapot/kettle tii maka ịme tii ụtọ ma ọ bụ mmiri esi.
Enamel ochie nkedo ígwè teapot green nkedo ígwè teapot
Nkọwa ngwa ngwa ụdị ihe ọ drinkụ drinkụ ụdị: ite mmiri & Kettles Asambodo: FDA, LFGB, Sgs Njirimara: Ebe na-adigide Mmalite: Hebei, China Aha ika: FORREST Nọmba Model: FRS-1052 Mbukota: aja aja ma ọ bụ agba bo...
Ego kacha mma Eurofin akwadoro agba odo enamel tetsubin nkedo kettle teapot nwere S/S Infuser
Nkọwa ngwa ngwa Ụdị ihe ọṅụṅụ: kọfị & tii na-edozi ihe: metal metal ụdị: Cast Iron Asambodo: FDA, LFGB, Sgs Njirimara: Na-adigide Ebe Mmalite: China Brand Name: FORREST ...
Nkedo ígwè enamel 0.6l teapot
Nkọwa ngwa ngwa Ụdị nkọwa ngwa ngwa: Mmiri Kettles Ihe: Metal Metal Type: Cast Iron Asambodo: FDA, LFGB, Sgs Njirimara: Na-adigide Ebe Mmalite: Hebei, China Aha Aha: FORREST Model Number...